Edgard sy Orlando: Lasa namonjy an’i Hery Rajaonarimampianina
Vous êtes ici : Accueil GAZETIN'NY NOSY Edgard sy Orlando: Lasa namonjy an’i Hery Rajaonarimampianina
Rechercher Valider	Edgard sy Orlando: Lasa namonjy an’i Hery Rajaonarimampianina	Imprimer	Mihazakazaka izay tsy izy ny raharaham-pirenena ankehitriny. Tsy fantatra intsony ny hiafarany satria toa hazakazaka ampidinana ireny no fahitana azy. Misy ny milaza fa tsy maintsy aongana amin’ izay ingahy Hery Rajaonarimampianina satria tsy mandeha amin’ny tokony ho izy intsony ny raharaham-panjakana rehetra. Misy indray antokon’olona milaza fa aleo avela hijanona eo ihany fa efa akaiky ny taona 2018 izay hanaovana fifidianana indray ka amin’izay fotoana izay no hitsarana azy. Ao koa nefa ireo izay mitady ny fiarahana mitantana ny firenena mba hialana amin’ny korontana izay ahiana mafy ny fahatongavany. Ireo no ady hevitra ankehitriny ka mahatonga ny tsy fitoviam-pijery amin’ny mpanohitra izay milaza ny hanongam-panjakana.
Ny tena nanaitra ny mpanaraka ny vaovao pôlitika ankehitriny indray dia ny fahitana fa nivadika nanampy an’i Hery Rajaonarimampianina ingahy Edgard Razafindravaha sy Orlando Robimanana. Izy roalahy ireto dia isan’ny olona nilaza fa tsy mankasitraka izao fitondram-panjakana izao. Ingahy Edgard Razafindravaha dia efa nanao fitetezam-paritra ny amin’ny hilatsahany ho filoham-pirenena amin’ny 2018 izao ka hifaninana amin’i Hery Rajaonarimampianina izay mitondra amin’izao fotoana izao. Hatrany ambanivohitra lavitra andriana any dia efa nitoriany izany faniriany izany avokoa ary nilazany ny zavatra tsy mety ataon’io fanjakana io. Mivoy sy namoaka boky mahakasika ny “fédéralisme” na ny fizakan-tena isam-paritra izy dia nangina tsy niteny intsony amin’izao fotoana izao. Ny fahitana azy dia eo akaikin’ingahy Hery Rajaonarimampianina ankehitriny. Gaga avokoa ny rehetra nahita ity raharaha ity. Nivadika ny palitaon’ ingahy Edgard Razafindravaha ka niaraka amin’ny filoham-pirenena izay efa tadiavin’ny mpanohitra sy ny vahoaka haongana ankehitriny.
Ny tena nahagaga ny olona indray dia ny fahenoana fa nanatona an’ingahy Hery Rajaonarimampianina koa ingahy Orlando Robimanana. Ity olona ity nefa dia noroahin’ingahy Hery Rjaonarimampianina tao amin’ny andraikitra lehibe notanany tamin’ny maha-tale jeneralin’ny tahirimbolam-panjakana azy. Niantsoana Emmo-Reg mihitsy ny fanesorana azy tao amin’ny biraony tamin’ny taona 2015. Niteraka korontana teto Antananarivo izany tamin’ny fotoana nisehoany satria nitokona hatramin’ny mpiasan’ny tahirim-bolam-panjakana. Ady tsy nisy toa izany ary navoaka an-gazety ny ratsy nataon’ny fanjakana tamin’izany fotoana izany amin’ny tsy fanajana ny famoaham-bolam-pirenena. Indrisy nefa fa nivadika ny rasa ankehitriny ka nifanaraka indray ingahy Orlando Robimanana sy Hery Rajaonarimampianina.
Tezitra ny mpanaraka azy roalahy lasa nivadika ireo ankehitriny. Diso fanantenana tanteraka amin’ny fiovana tampoka izao, ary kivy tanteraka amin’ny fihetsika izao.
Dia mbola izao hatrany ve no hilalaovana ny vahoaka Malagasy? Tsy mahagaga raha tsy matoky ireo milaza azy ho mpanao pôlitika sy tia tanindrazana ny olona satria hafa ny lazain’ny vava ary hafa no tondroin’ny molotra.